Izinqolobane Zangempela Zangempela - Mytika Speak
Ikhaya / Okwangempela
Umaki - Ukuzethemba Kweqiniso
Lapho umuntu ehlangane ne-True Self yabo, bathola umuzwa wokuvikeleka okufudumele. Kuzwakala njengokugcwalisa isikhala nokuthola okuthile umuntu abekade ekufuna. Lokhu ...
Ingabe i-True Self ilawula isimilo somuntu?
I-True Self ayisilawuli isimilo somuntu ngoba wonke umuntu unenkululeko yokuzikhethela ngaso sonke isikhathi. Isibonelo, uLaila uhlale azi ukuthi ufuna i ...
Iyiphi indima edlalwa ngu-Ego no-True Self ekuphazamiseni?
Ukuze ukufundise izifundo, u-Ego usebenzisa iziphazamiso njengendlela yokulingwa. I-Ego iyakuphazamisa ngokunikezela ngokuqhubekayo kokuthuthuka ngokomzimba ...
Imizwa yimizwa ebangelwa amandla e-True Self. Lapho i-True Self ishukunyiswa ukuhlangana komlingiswa wakho nokucabanga kwayo, kuyasusa ...
Ingabe i-True Self iyaziveza?
I-True Self ivezwa ngemizwa. Noma yini eyenziwayo ukudala imizwa komunye, isenzo se-True Self. Kungabonakala ukumamatheka kwe ...
Ingabe Uqobo Lwami UnguNkulunkulu?
I-True Self iyingxenye kaNkulunkulu, njengoba noNkulunkulu eyingxenye yabo bonke abantu. I-True Self yilokho okuvumela umuntu ukuthi azizwe futhi kumgcine exhumene nonembeza wakhe. Okwami ​​...
Ingabe ikhona indlela ethile yokuxhumana ngokuziqonda ne-True Self?
Ngokunciphisa ukuphazamiseka, ungagxila ekutheni uzizwa kanjani ngaphakathi mayelana nezici ezahlukahlukene zempilo yakho. Ngezinye izikhathi, kungathatha isikhashana ukuxhuma kabusha ...
Ngabe i-True Self ixhumana kanjani?
I-True Self ixhumana ngokukuhola ngemizwa. Ingqondo yakho isebenza njengesihlungi phakathi komphefumulo wakho (i-True Self) nobuchopho bakho (uhlamvu). Njengoba ubuchopho bakho buthumela ...
Ngabe i-Ego ingasiza abantu ukuthi bathole injabulo yabo?
Ngezifundo, abantu bafundiswa ukuxhumana ne-True Self yabo. Ngokwenza lokhu, bangakhombisa futhi bathole ukuthi yini ngempela ebenza bajabule. Lezi ...
Ziyini izindima ze-True Self kanye nomlingiswa?
I-True Self yakho iyachuma ngokwenza umlingiswa wakho ajabule futhi agcwaliseke. Okwamanje, isimilo sakho sizimisele ukuvikela i-True Self yakho ekulimaleni ngokomzwelo ...
1 2 Olandelayo
Luyini “Uthando Nokukhanya” nokuthi “Inzondo Nobumnyama”?
Kungani iziphazamiso zisebenza kangaka?